Dr. Dufle oo mar kale loo doortay Aqalka sare ee BFS | KEYDMEDIA ONLINE
Dr. Dufle oo mar kale loo doortay Aqalka sare ee BFS
Kaddib markii wareegga labaad ee doorashada uu kula tartamay, Raage Xasan Cusmaan oo ah nin dhallinyaro ah, kaas oo helay 28 cod, balse labo cod ay ka halowday, halka Dr. Dufle uu helay wareegii labaad ee doorashada codad gaaraya 68 cod.
JOWHAR, Soomaaliya - Markale ayuu noqonayaa Senator ka tirsan Aqalka Sare, Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle, kaddib markii wareegga labaad ee doorashada uu kula tartamay, Raage Xasan Cusmaan oo ah nin dhallinyaro ah, kaas oo helay 28 cod, balse labo cod ay ka halowday.
Dr. Dufle ayaa helay wareegii labaad ee doorashada codad gaaraya 68 cod.
Maxamed Nuur Tarsan oo isna tartanka qeyb ka ahaa ayaa isaga haray wareegii koowaad ee doorashada, kaddib markii uu helay codad dhan 19 cod, Tarsan ayaa aad ugu dhaw kooxda Farmaajo, balse isaga, Cabdullaahi Shiikh Xasan iyo kuwo kale ayaa ku hungoobay hamigoodii ahaa inay ku soo baxaan doorashada Hir-Shabeelle.
Afar ka mid ah, sideeda kursi ee deegaan doorashadoodu tahay Hir-Shabeelle ayaa la doortay, inkastoo saddex kamid ah kuraastaas ay dib u hanteen senataradii hore ugu fadhiday, kuwaas oo kala ah Muuse Suudi Yalaxow, Fartuun Cabdulqaadir Faarax Karaama iyo Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle, halka sanatarka sannadkan ku cusub uu yahay Nuur Maxamed Geedi Canjeex.
Berri oo Khamiis ah ayaa lagu wadaa in la soo afmeero doorashada Aqalka Sare ee Hir-Shabelle oo afar kursi ay ka harsan tahay doorashadeeda.
Warkaan waa war deg-deg ah, faah-faahintiisa berri kala soco bogga hore ee Keydmedia Online